Qingdao Yinuoxin New Material Co., Ltd. waxay ku taalaa magaalo xeebeedka quruxda badan ee Qingdao, bariga Jiaozhou Bay, una dhow Wadada Xawaaraha Qingyin. Agagaarka Gegada Diyaaradaha Qingdao, Terminal-ka Huangdao Container, Port Qingdao, Rizhao Bulk Cargo Terminal, gaadiidku waa mid haboon oo habsami leh. Shirkadeenu waxay xaq u leedahay inay soo dejiso oo ay dhoofiso, waana shirkad soo saarta taxane lagu daro waxyaabo caag ah oo iibiya wax soo saarka kiimikada oo tayo sare leh.
Nala soo xiriir si aad u hesho albumyo dheeri ah
Waxaan leenahay xirfadle, heer sare ah, adeeg iibin tayo sare leh iyo shaqaale maamul
Hadday tahay iibin ka hor ama ka dib iibka, waxaan ku siin doonnaa adeegga ugu fiican, kaasoo kuu oggolaanaya inaad fahamto oo aad u isticmaasho alaabteenna si ka dhakhso badan.
Tan iyo markii la aas aasay sideed sano ka hor, shirkadda waxaa ka go’an inay siiso macaamiil dal iyo dibad wax soo saar tayo sare leh oo tayo sare leh.
Wax soo saarkayagu waxay leeyihiin tayo wanaagsan iyo sumcad, taas oo noo sahlaysa inaan dalkeena ka samayno laamo badan iyo kuwa wax qaybiya.
112020 / Nofeembar
Maxay ku kala duwan yihiin Tween 80 iyo Tween 20?
Aynu wax ka baranno Tween 80 (oo sidoo kale loo yaqaan Tween 80 ama polysorbate 80) iyo Tween 20 (sidoo kale loo yaqaan Tween 20) seddex siyaabood oo kala duwan Soo koobidda Tween 20: isku dar ah polyetyl ​​...
Codsiga wakiilka sii deynta silikoon ee warshadaha wax soo saarka
Muddo dheer, warshadaha wax soo saarku aad ayey taxaddar uga leeyihiin codsiga wakiilka sii deynta gudaha ee silicone. Tani waxaa laga yaabaa inay wax badan ku sameyso fahamka kala duwan iyo isticmaalka badeecada Waxaa jira ismaandhaafyo dhowr ah oo ku saabsan sii deynta wakiilka silica gel One. Saamaynta abaalmarinta ...
Sanadka 2025, qiimaha suuqa adduunka ee carbomer ayaa la filayaa inuu kordho ilaa 10.34 bilyan yuan
Awoodda suuqa ee carbomer Qingdao waa mid weyn. Waxaa la ogaaday in shanta sano ee soo socota, ay jiri doonto 10.34 bilyan oo yuan suuq ah oo la horumarin doono sanadka 2025. Marka xigta, aan raacno qalabka cusub ee Qingdao yinuoxin Carbomer waa isku-duwaha acrylic acid, iskutallaabta ama isku xirka wax kasta oo o ...